Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii EPRDF oo Dhamaaday & Kala Aragti Duwanaansho Kamuuqda.
Kulankii EPRDF oo Dhamaaday & Kala Aragti Duwanaansho Kamuuqda.
Waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya kusoo gabagaboobay shir ay yeesheen ururka EPRDF ee talada wadanka Itoobiya hayay 27dii sano ee lasoo dhaafay.
Sida xogta aan kuhelay kulanka ayaa ahaa mid xaasaasi ah waxaana mudadii uu socday lagu gorfeeyay arimo dhowr ah oo ay kamid tahay sidii wadanka looga saari lahaa marxalada qalafsan ee uu kujiro iyo sidii farta loogu fiiqi lahaa cida kadambaysa qaska iyo qalalaasaha wadanka.
Kulanka saxaafadu ay dibad joog ka ahayd ayaa laga soosaaray qodobo dhowr ah oo intooda badan ay kusalaysan yihiin wax kaqabashada wixii dhacay iyo dii mardambe aysan udhaceen waxaana kamid ahaa qodobadii kulanka laga soosaaray.
1 in baadhitaan buuxa lagu sameeyo sababaha keenay hoos u dhaca baahsan ee kuyimid waxyaabihii ay Itoobiya dhoofin jirtay, kuwaas oo qarka usaaran in ay meesha kabaxaan.
2 in baadhitaan lagu sameeyo xal waarana looraadiyo lacagihii adkaa oo wadanka kabaxay isla markaana keenay sicir-bararka iyo dhaqaale xumida wadanka ku habsatay.
3 in baadhitaan qodo dheer lagu sameeyay sababta hoos uriday canshuurihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay isla markaana umuuqda kuwo hoos usii dhici doona hadii aan dhakhso wax looga qabanin.
4 in qorshe wayn loosameeyo arimaha Fadaraalka oo aad loogu kala aragti duwanyahay isla markaana kulanka soosocda ee ururka sifiican loogu lafo guro xalna laga gaadho.
Arimaha Fadaraalka wadanka waxaa aad ugu kala aragti duwan qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada oo kuwada jira isbahaysiga EPRDF, waxaana lafilayaa kala aragti duwanaanshaha qoomiyadaha in ay qayb katahay dhibka wadanka haysta.
Qoomiyada Axmaarada ayaa iyadu u aragta in habka Fadaraalku uu wadanka dhib kuhayo isla markaana qabyaalada iyo dagaalada qoomiyadaha uu Fadaraalku keenay.
Dhinaca kale qoomiyada Oromada ayaa Fadaraalka u aragta habka kaliya ee wadanku uu kuwada joogi karo, waxayna kudoodayaan in hadii habkaas lasaxo hormar lagu gaadhi doono.
Xubnaha gudiga fulinta ee EPRDF oo 36 xubnood kakooban ayaa umuuqda kuwo isku maandhaafsan habkii wadanka loomaamuli lahaa, waxaana markasta dibada usoo baxa khilaafka ururka.